Norway oo bilowday in ay Soomaalida ka ceshato baasaboorka iyo sharciga - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Norway ayaa baasaboorka ka ceshatay dhowr qof oo Soomaali ah kuwaasoo lagu amray in ay wadanka isaga baxaan si degdeg ah. Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa Norway waxay baaritaan ku haysay dhowr boqol oo Soomaali ah kuwaasoo looga shakiyay in ay been ka sheegeen codsigooda qaxootinimo. Dadkdaas ayaa qaarkood looga shaki qabay in ay yihiin reer Jibuuti iyo wadamo kale.
Hadda ayaa hay’ada socdaalka Norway UDI waxay baasaboorka dhalashada kala noqotay dhowr qof oo Soomaali ah. Halka qaar kale laga ceshaday sharcigii deganaanshaha. Dadlkaas ayaa lagu amray in ay wadanka Norway degdeg uga baxaan. Mahad Abib Mahamud oo Norway soo galay sanadkii 2000 ayaa ka mid ah dadka sharciga laga ceshaday, iyadoo la sheegay in dadkale ay soo jaajuuseen.
Hay’ada UDI ayaa sheegtay in ay ninkaan baaritaan dheer ku sameeyeen sida safaradii uu ku tagay Jibuuti, lacagaha uu diro, luuqadiisa, telefoonada uu waco, dadka uu Facebook saaxiib kula yahay iyo xitaa xaaskiisii hore oo ay wareysi ay la yeesheen.
Ninkaan ayaa isagu ku dooday in ay soo jaajuuseen dad siyaasiyiin ah oo isaga ka soo horjeeda.
Diyaarad Ay Leedahay EgyptAir Oo La La’ Yahay